SUUQA KALA IIBSIGA: Man United Oo Bankiga U Jabineysa Soo Xerogelinta Xiddigii Xalayto Atletico Madrid U Soo Saaray Finalka Champions League.
Manchester United ayaa diyaar u ah inay bankiga u jabiso saxiixa xiddiga weerarka ka ciyaara ee kooxda Atletico Madrid Antoine Griezmann.
Xiddiga reer Faransa ayaa ugu sareeya liiska ciyaartoyda ay dooneyso kooxda Red Devils xagaagan ka dib markii uu xilli ciyaareed kale oo cajiib ah la qaatay tababare Diego Simeone.
Griezmann ayaa ah xiddiga ugu goolasha badan Atletico Madrid ee horyaalka La Liga iyadoo kooxda ka dhisan caasimada Spain ay tartanka horyaalka kula jirto Barcelona, waxaana uu shabaqa soo taabtay 31 jeer tartamada oo dhan xilli ciyaareedkan.
Xiddiga garabka ka ciyaara oo sidoo kale awooda inuu ka dheelo booska gooldhaliyaha ayaa sidoo kale diirada u saaran kooxda Chelsea iyadoo tababare Antonio Conte uu isku diyaarinayo inuu isbedel ku sameeyo Stamford Bridge.
Laakiin sida ay qortay warbaahinta Isbaanishka ee El Confedencial, United ayaa diyaar u ah inay bixiso wax walba oo ay ku qaadato sidii ay Griezmann u keeni lahaayeen Old Trafford.
25 jirkaan ayaa la aaminsan yahay in qandaraaskiisa Atletico Madrid lagu burburin karo 65 milyan ginni, waxaana Red Devils ay u muuqataa mid bixineysa lacagtaas inkastoo calaamad su’aal ay dulsaaran tahay mustaqbalka tababarahooda
Diego Simeone Oo Ka Badbaaday Ganaax Madaama Sarkaalkii Uu Dharbaaxay Uu Noqday Mid Ka Mid Ah Saraakiisha Atletico Madrid.
Diego Simeone ayaa marar qaar waxaa ka xoog bata dareenkiisa inta ay ciyaaraha socdaan laakiin ninka reer Argentina ayaa gaaray xalayto heer kale ka dib markii uu dharbaaxay mid ka mid ah saraakiisha kooxda intii ay socotay kulankii wareega afar dhamaadka ee Champions League ee ay ka gudbeen kooxda Bayern Munich.
46 jirkaan ayaa haatan maraya seddex kulan oo laga mamnuucay kurisga keydka horyaalka La Liga ka dib markii kubad dheeri ah lagu soo tuuray garoonka iyadoo Malaga ay fursad kubad rogaalcelis ah heysatay kulankii isbuucii hore.
Bayern Munich ayaa hogaanka qabatay kulankii xalayto markii Xabi Alonso uu laad xor ah u dhaliyay, laakiin Antonie Griezmann ayaa u barbareeyay kooxda Atletico Madrid ka hor inta uusan Robert Lowendowski xilli danbe goolka guusha u dhalinin kooxda Jarmalka.
Laakiin guushaas waxba ma aysan noqonin oo Atletico Madrid ayaa ku soo baxday sharciga goolasha martida ah madaama ay 1-0 ku badiyeen kulankii gurigooda ee isbuucii hore.
Ciyaarta ayaa aheyd mid xamaasadeysan, waxaana sida ay cad ay saameyn ku yeelatay Diego Simeone, tababaraha reer Argentin ayaa isku dayay inuu bedel ku soo geliyo Savic si uu waqtiga u dhumiyo iyadoo Bayern ay raadineysay goolkii ay ku soo bixi laheyd, laakiin caawiyihiisa dhanka maamulka ayaa ku guuldareystay inuu ansixiyo bedelka.
Simeone ayaana carro darteed garabka uga dharbaaxay weliba si xoog ah Pedro Pablo Matesanz oo gacanta ku hayay boorka bedelka.
Madaama Matesanz uu u shaqeeyo Atletico islamarkaana uusan u shaqeynin UEFA, tababare Diego Simeone lama kulmi doono wax ganaax ah
Zidane Oo Qaba In Guushii Premier League Ay Kasoo Hooysay Leicester Ineysan Aheyn Mucjiso Laakin Ay Tahay Karti
Macalinka kooxda Real Madrid ee Zinadine Zidane ayaa diiday inuu saxaafada caalamku ku raaco in gushii layaabka laheyd ee ay Leicester ka gaartay horyaalka Premier league ay tahay mucjiso.
Kooxda lagu naaneeso Foxes ayaa kasoo kacay kaalinta 14aad xili ciyaareedkii hore oo ay waliba si dirqi ah kaga badbaadeen u laabashada heerka labaad waxayna xili ciyaareedkaan guuldareysteen kaliya sadex kulan waxayna si layaab leh u hanteen horyaalka inkastoo ay wali joogeen kooxihii lagu tilmaami jiry “Big Boys” ee Arsenal, Chelsea, Liverpool iyo labada Manchester !
Isagoo la hadlayay saxaafada ayuu yiri Zidane “Howsha uu qabtay Claudio Rianeri waa mid aan caadi aheyn, waa mid layaab leh, wuxuu sameeyay wax tusaale u ah cid waliba laakin waxaan qabaa in taasi aysan aheyn mucjiso ee ay tahay dadaal iyo shaqo adeeg”.
“kooxda dhan ayaa shaqo adag qabatay, xaqiiq waxaa ah iney dadaal dheeri ah sameeyeen xili danbe oo xili ciyaareedka ah laakin xitaan iyaga wey ku adkeyd iney qiyaasaan iney hanan karaan horyaalka, haatan waxay muujiyeen in cidii dadaashaa ay miro guraneyso”.